Alert! Odeessi qabatamaan akka ibsutti OPDOn dhoksaadhaan boritti Adaamaatti yaa’ii yaamaa jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAlert! Odeessi qabatamaan akka ibsutti OPDOn dhoksaadhaan boritti Adaamaatti yaa’ii yaamaa jiru.
Ajandaa dhoksaniitu achitti confuse godhanii wuhudatii biltsiginaa san mirkaneessisuuf deemu. Hirmaattonni yaaichaa dursanii kana hubachuun akka gaaffii jajjabaa kaasuun dura dhaabbatan haa gargaarru. An amma school waan jiruuf waan tahuu qaburratti ballinaan dubbachuuf yeroo hin arganne. Aktivistoonni keenya biroon waan tahuu qaburratti yaada dadarbadhaa.
Odeessi Jimma irraa na dhaqqabaa jiru akka ibsutti Qeerroon Jimmaa sabboonoon doorsifamaa akka jirani dha. Caasaan OPDO godinichaa (muraasa irraa kan hafe) irra caalaatti caasaadhuma bara Muktaar/Wayyaanee akka tahanii fi akkuma gaafasiitti sabboontota Oromoo doorsisuutti jiru. Qeerroon Jimmaa kan amma doorsfaman kun waggoota afran shanan dabran hundee sabboonummaa cimaa godina sanatti kan gd dhaabanii dha. Qabsoo Wayyaanee sana buqqise keessatti gumaacha isaanirraa eegamu guddaa godhan. OPDOn gaafa Wayyaanee irraa cabsinee Maqaleetti galchinu san rifattee sabboonaa of fakkeessaa baate har’a yeroo eeggattee eenyummaa isii kaleessaatti deebiteetti. Kun haaromsiichi akka gufate agarsiisa. Haalli amma jiru kan sabboontonni itti adamsamanii fi mooraa Nafxanyaa ammoo lafa nutti dhiitu tahee jira.
Abiyyi Jimmatti waan dhalateef isa hin deeggartu yoo tahe ati diina Jimmaati doorsifni jedhu qaanfachisaa fi sadarkaa sabboonummaan Oromoo har’a gahe kan madaalu miti. Kun toftaa ittiin tokkummaa Oromoo ciranii ganda gandatti galchuun Nafxanyaa nurratti burraaqsisuuf hojjetamaa jiruun wal qabata. Jarana maal taatan? Abiyyi fedhu Jimmatti, fedhu Shawaatti, fedhus Arsiitti dhalachuu mala. Kan isa jaalachiisus tahee mormisiisu hojii isaa qofa. Oromoof gaarii hojjennaan Oromoo hundatu jaalataan. Oromoo miidhee diina Oromoo fayyada taanaan ganda dhalootaa kamuu jala dhokachuu hin danda’u, ni mormama. Kaleessa yeroo reef aangoo qabatu Oromoo hundatu abdiin isa eegaa ture. “Hin tuqinaa, yeroo kennineefii laalla jennee” sababa isaa jaallan hedduun wal dhabne. Inni garuu faallaa kanaan waan nu godhe har’a Oromoon cufti argaa jira. Jimmas Oromoo irraa adda tahuu hin danda’u. Abiyyi maqaa isaa harkumaan ofirratti balfaa jiru dhokfachuuf godoo gandummaa jalatti dhokatee xurii isaa Jimmatti dhoobuu yaalaa jira taanaan hin milkaahu. Sabboontonnis kana hin hayyamanuuf.
Sabboonummaa Oromummaa qabsoo yeroo dheeraa booda naannoo sanatti haaromsine. Qoodni gootota godina kanatti dhalatanii kan duriis tahee kan ammaa bakka itti Abiyyiinwal qabatu hin qabu. Sulxaan Abbaa Joobir irraa qabee sabboontonni qoricha Nafxanyaa turan kan Jimma biqilchite hedduu dha. Jarri sun hundi osoo lubbuun jiraatanii waan har’a OPDOn Jimmaa Oromummaa salphiftee gandummaa Nafxanyootaaf mojooftu uumuuf dhamaatu kana arganii baay’ee gaddu turan. Abiyyiif kaleessa yeroo kenninee jirra. Fayyadamuu hin dandeenye. Sabboonummaa Oromummaatiin araaramuu hin feene. Kanaaf ammoo ummanni gaafa filmaanni gahe sagalee isaatiin murtii ni dabarsaaf. Hanga sanatti garuu warri OPDO sabrii godhaa. Doorsisa abdii kutanootiin joollee ganda keessaa dhama’uu gandummaa qabsiisuuf dhama’uu dhiisaa.